Ajaaniibta ku nool Soomaaliya oo la tirakoobayo! – Hornafrik Media Network
Ajaaniibta ku nool Soomaaliya oo la tirakoobayo!
Hornafrik-Xukuummadda Federaalka Soomaaliya (XFS) ayaa go’aamisay in tirakoob rasmi ah lagu sameeyo dadka ajaanibta ah ee kusoo qulqulaya gudaha dalka si loola socdo dhaq-dhaqaaqyada ay ka samaynayaan gudaha dalka iyada oo la waafajinayo hannaanka qaxootiga iyo socdaalka ee u yaalla dunida.
Ciidamada AMISOM oo isaga baxaya garoonka Kubadda Cagta ee Mogadishu Stadium.
Dowlada Jabuuti Oo Ka Hashay Xiriirka ay Laleedahay Soomaaliya